သာသနာရေးဝန်ကြီး(ဟောင်း)ဦးဆန်းဆင့် ဦးဆောင်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ အင်အားအလုံးအရင်းဖြင့် တားဆီး - People Media Myanmar
Home သာသနာရေးဝန်ကြီး(ဟောင်း)ဦးဆန်းဆင့် ဦးဆောင်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ အင်အားအလုံးအရင်းဖြင့် တားဆီး
သာသနာရေးဝန်ကြီး(ဟောင်း)ဦးဆန်းဆင့် ဦးဆောင်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ အင်အားအလုံးအရင်းဖြင့် တားဆီး
PUBLISHED - November 22, 2019
ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးညှင်းမြို့နယ်၊ ထန်းတပင်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ သာသနာ့ရွှေသစ်ပင်ကျောင်းတိုက်တွင် မြန်မာ နိုင်လုံးဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုတောင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂမှ မိုးညှင်းမြို့နယ်မှ တောင်သူများနှင့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်စဉ် မိုးညှင်းမြို့နယ်ရဲစခန်းမှ ရဲအင်အားအလုံးအရင်းဖြင့် လာရောက်တားဆီးခံရတယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ တောင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့မှ လက်ရှိနာယကဖြစ်သူ သာသနာရေးဝန်ကြီးဟောင်း ဦးဆန်းဆင့်ကပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို မိုးညှင်းမြို့နယ်မှ လယ်သိမ်းယာသိမ်း၊ တပ်သိမ်းခံတောင်သူများ တက်ရောက်ခဲ့ ကြပြီး လည်းကောင်းတို့ရဲ့နစ်နာမှုများကို တစ်ဦးခြင်း တင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ မိုးညှင်းခရိုင်မိုးညှင်းမြို့နယ်တရားရုံး မှာ အင်းတော်ကြီးဒေသမှာရှိတဲ့ အစိုးရလုပ်ခွင့်ရကုမ္မဏီများနဲ့ လယ်ယာမြေအငြင်းပွားမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့် တရား စွဲခံတောင်သူများကလည်း ယခင်အစိုးရလက်ထက်မှ ယခုအစိုးရလက်ထက်အထိ (၃)နှစ်ကျော် (၄) နှစ်နီးပါး အထိ တရားရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့အတွက် လုပ်ကိုင်စားသောက်ရန်အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ အင်းတော်ကြီးဒေသ ကတောင်သူတွေက ပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ မိုးညှငိးမြို့နယ်က တောင်သူများအတွက် ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာ ခက်အောင်နှင့် တွေ့ဆုံခွင့်ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပြီး နစ်နာမှုများကို တင်ပြပေးသွားမယ်လို့. သာသနာရေး ဝန်ကြီးဟောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ တောင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်နာယက ဦးဆန်းဆင့်ကပြောကြား ခဲ့ပြီး မိုးညှင်းမြို့နယ်ရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိသူများက တားဆီးပိတ်ပင်ခြင်းကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတောင်သူ လယ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချူပ်အနေနဲ့ ကြေငြာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မိုးညှင်းမြို့မရဲစခန်းမှ စခန်းမှူးလေးမြင့်ကို မေးမြန်းရာမှာ လာရောက်လေ့လာတာ ဖြစ်ပြီး အခြားတော့မရှိပါဘူး အကြောင်းတော့ကြားထားတာရှိပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
သာသနာရေးဝနျကွီး(ဟောငျး)ဦးဆနျးဆငျ့ ဦးဆောငျသညျ့ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲကို မွို့နယျရဲတပျဖှဲ့မှ အငျအားအလုံးအရငျးဖွငျ့ တားဆီး ………………………………………………………………………………………
ကခငျြပွညျနယျ၊ မိုးညှငျးမွို့နယျ၊ ထနျးတပငျကြေးရှာမှာရှိတဲ့ သာသနာ့ရှသေဈပငျကြောငျးတိုကျတှငျ မွနျမာ နိုငျလုံးဆိုငျရာ ပွညျထောငျစုတောငျသူလယျသမားသမဂ်ဂမှ မိုးညှငျးမွို့နယျမှ တောငျသူမြားနှငျ့ သတငျးစာ ရှငျးလငျးပှဲပွုလုပျစဉျ မိုးညှငျးမွို့နယျရဲစခနျးမှ ရဲအငျအားအလုံးအရငျးဖွငျ့ လာရောကျတားဆီးခံရတယျလို့ မွနျမာနိုငျငံလုံးဆိုငျရာ တောငျသူလယျသမားသမဂ်ဂအဖှဲ့မှ လကျရှိနာယကဖွဈသူ သာသနာရေးဝနျကွီးဟောငျး ဦးဆနျးဆငျ့ကပွောပါတယျ။
အဲ့ဒီသတငျးစာရှငျးလငျးပှဲကို မိုးညှငျးမွို့နယျမှ လယျသိမျးယာသိမျး၊ တပျသိမျးခံတောငျသူမြား တကျရောကျခဲ့ ကွပွီး လညျးကောငျးတို့ရဲ့နဈနာမှုမြားကို တဈဦးခွငျး တငျပွခဲ့ကွပါတယျ။ မိုးညှငျးခရိုငျမိုးညှငျးမွို့နယျတရားရုံး မှာ အငျးတျောကွီးဒသေမှာရှိတဲ့ အစိုးရလုပျခှငျ့ရကုမ်မဏီမြားနဲ့ လယျယာမွအေငွငျးပှားမှုဖွဈစဉျကွောငျ့ တရား စှဲခံတောငျသူမြားကလညျး ယခငျအစိုးရလကျထကျမှ ယခုအစိုးရလကျထကျအထိ (၃)နှဈကြျော (၄) နှဈနီးပါး အထိ တရားရငျဆိုငျနကွေရတဲ့အတှကျ လုပျကိုငျစားသောကျရနျအခကျအခဲရှိနတေယျလို့ အငျးတျောကွီးဒသေ ကတောငျသူတှကေ ပွောပါတယျ။
အဲ့ဒီသတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာ မိုးညှငိးမွို့နယျက တောငျသူမြားအတှကျ ကခငျြပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျဒေါကျတာ ခကျအောငျနှငျ့ တှဆေုံ့ခှငျ့ရရှိအောငျ ဆောငျရှကျပွီး နဈနာမှုမြားကို တငျပွပေးသှားမယျလို့. သာသနာရေး ဝနျကွီးဟောငျး၊ မွနျမာနိုငျငံလုံးဆိုငျရာ တောငျသူလယျသမားသမဂ်ဂအဖှဲ့ခြုပျနာယက ဦးဆနျးဆငျ့ကပွောကွား ခဲ့ပွီး မိုးညှငျးမွို့နယျရဲစခနျးမှ တာဝနျရှိသူမြားက တားဆီးပိတျပငျခွငျးကိုလညျး မွနျမာနိုငျငံလုံးဆိုငျရာတောငျသူ လယျသမားသမဂ်ဂအဖှဲ့ခြူပျအနနေဲ့ ကွငွောခကျြတဈစောငျ ထုတျပွနျသှားမယျလို့ သိရပါတယျ။
အဲ့ဒီဖွဈစဉျနဲ့ပတျသကျပွီး မိုးညှငျးမွို့မရဲစခနျးမှ စခနျးမှူးလေးမွငျ့ကို မေးမွနျးရာမှာ လာရောကျလလေ့ာတာ ဖွဈပွီး အခွားတော့မရှိပါဘူး အကွောငျးတော့ကွားထားတာရှိပါတယျလို့ ပွောပါတယျ။
သာသနာရေးဝန်ကြီး(ဟောင်း)ဦးဆန်းဆင့် ဦးဆောင်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ အင်အားအလုံးအရင်းဖြင့် တားဆီး ………………………………………………………………………………………ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးညှင်းမြို့နယ်၊ ထန်းတပင်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ သာသနာ့ရွှေသစ်ပင်ကျောင်းတိုက်တွင် မြန်မာ နိုင်လုံးဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုတောင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂမှ မိုးညှင်းမြို့နယ်မှ တောင်သူများနှင့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်စဉ် မိုးညှင်းမြို့နယ်ရဲစခန်းမှ ရဲအင်အားအလုံးအရင်းဖြင့် လာရောက်တားဆီးခံရတယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ တောင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့မှ လက်ရှိနာယကဖြစ်သူ သာသနာရေးဝန်ကြီးဟောင်း ဦးဆန်းဆင့်ကပြောပါတယ်။ အဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို မိုးညှင်းမြို့နယ်မှ လယ်သိမ်းယာသိမ်း၊ တပ်သိမ်းခံတောင်သူများ တက်ရောက်ခဲ့ ကြပြီး လည်းကောင်းတို့ရဲ့နစ်နာမှုများကို တစ်ဦးခြင်း တင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ မိုးညှင်းခရိုင်မိုးညှင်းမြို့နယ်တရားရုံး မှာ အင်းတော်ကြီးဒေသမှာရှိတဲ့ အစိုးရလုပ်ခွင့်ရကုမ္မဏီများနဲ့ လယ်ယာမြေအငြင်းပွားမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့် တရား စွဲခံတောင်သူများကလည်း ယခင်အစိုးရလက်ထက်မှ ယခုအစိုးရလက်ထက်အထိ (၃)နှစ်ကျော် (၄) နှစ်နီးပါး အထိ တရားရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့အတွက် လုပ်ကိုင်စားသောက်ရန်အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ အင်းတော်ကြီးဒေသ ကတောင်သူတွေက ပြောပါတယ်။ အဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ မိုးညှငိးမြို့နယ်က တောင်သူများအတွက် ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာ ခက်အောင်နှင့် တွေ့ဆုံခွင့်ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပြီး နစ်နာမှုများကို တင်ပြပေးသွားမယ်လို့. သာသနာရေး ဝန်ကြီးဟောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ တောင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်နာယက ဦးဆန်းဆင့်ကပြောကြား ခဲ့ပြီး မိုးညှင်းမြို့နယ်ရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိသူများက တားဆီးပိတ်ပင်ခြင်းကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတောင်သူ လယ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချူပ်အနေနဲ့ ကြေငြာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မိုးညှင်းမြို့မရဲစခန်းမှ စခန်းမှူးလေးမြင့်ကို မေးမြန်းရာမှာ လာရောက်လေ့လာတာ ဖြစ်ပြီး အခြားတော့မရှိပါဘူး အကြောင်းတော့ကြားထားတာရှိပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။#PeopleMedia #Political(unicode)သာသနာရေးဝနျကွီး(ဟောငျး)ဦးဆနျးဆငျ့ ဦးဆောငျသညျ့ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲကို မွို့နယျရဲတပျဖှဲ့မှ အငျအားအလုံးအရငျးဖွငျ့ တားဆီး ………………………………………………………………………………………ကခငျြပွညျနယျ၊ မိုးညှငျးမွို့နယျ၊ ထနျးတပငျကြေးရှာမှာရှိတဲ့ သာသနာ့ရှသေဈပငျကြောငျးတိုကျတှငျ မွနျမာ နိုငျလုံးဆိုငျရာ ပွညျထောငျစုတောငျသူလယျသမားသမဂ်ဂမှ မိုးညှငျးမွို့နယျမှ တောငျသူမြားနှငျ့ သတငျးစာ ရှငျးလငျးပှဲပွုလုပျစဉျ မိုးညှငျးမွို့နယျရဲစခနျးမှ ရဲအငျအားအလုံးအရငျးဖွငျ့ လာရောကျတားဆီးခံရတယျလို့ မွနျမာနိုငျငံလုံးဆိုငျရာ တောငျသူလယျသမားသမဂ်ဂအဖှဲ့မှ လကျရှိနာယကဖွဈသူ သာသနာရေးဝနျကွီးဟောငျး ဦးဆနျးဆငျ့ကပွောပါတယျ။ အဲ့ဒီသတငျးစာရှငျးလငျးပှဲကို မိုးညှငျးမွို့နယျမှ လယျသိမျးယာသိမျး၊ တပျသိမျးခံတောငျသူမြား တကျရောကျခဲ့ ကွပွီး လညျးကောငျးတို့ရဲ့နဈနာမှုမြားကို တဈဦးခွငျး တငျပွခဲ့ကွပါတယျ။ မိုးညှငျးခရိုငျမိုးညှငျးမွို့နယျတရားရုံး မှာ အငျးတျောကွီးဒသေမှာရှိတဲ့ အစိုးရလုပျခှငျ့ရကုမ်မဏီမြားနဲ့ လယျယာမွအေငွငျးပှားမှုဖွဈစဉျကွောငျ့ တရား စှဲခံတောငျသူမြားကလညျး ယခငျအစိုးရလကျထကျမှ ယခုအစိုးရလကျထကျအထိ (၃)နှဈကြျော (၄) နှဈနီးပါး အထိ တရားရငျဆိုငျနကွေရတဲ့အတှကျ လုပျကိုငျစားသောကျရနျအခကျအခဲရှိနတေယျလို့ အငျးတျောကွီးဒသေ ကတောငျသူတှကေ ပွောပါတယျ။ အဲ့ဒီသတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာ မိုးညှငိးမွို့နယျက တောငျသူမြားအတှကျ ကခငျြပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျဒေါကျတာ ခကျအောငျနှငျ့ တှဆေုံ့ခှငျ့ရရှိအောငျ ဆောငျရှကျပွီး နဈနာမှုမြားကို တငျပွပေးသှားမယျလို့. သာသနာရေး ဝနျကွီးဟောငျး၊ မွနျမာနိုငျငံလုံးဆိုငျရာ တောငျသူလယျသမားသမဂ်ဂအဖှဲ့ခြုပျနာယက ဦးဆနျးဆငျ့ကပွောကွား ခဲ့ပွီး မိုးညှငျးမွို့နယျရဲစခနျးမှ တာဝနျရှိသူမြားက တားဆီးပိတျပငျခွငျးကိုလညျး မွနျမာနိုငျငံလုံးဆိုငျရာတောငျသူ လယျသမားသမဂ်ဂအဖှဲ့ခြူပျအနနေဲ့ ကွငွောခကျြတဈစောငျ ထုတျပွနျသှားမယျလို့ သိရပါတယျ။ အဲ့ဒီဖွဈစဉျနဲ့ပတျသကျပွီး မိုးညှငျးမွို့မရဲစခနျးမှ စခနျးမှူးလေးမွငျ့ကို မေးမွနျးရာမှာ လာရောကျလလေ့ာတာ ဖွဈပွီး အခွားတော့မရှိပါဘူး အကွောငျးတော့ကွားထားတာရှိပါတယျလို့ ပွောပါတယျ။#PeopleMedia #Political
Posted by People Media on Friday, November 22, 2019
« အာရှတိုက်၏ သြဇာအကြီးဆုံးအမျိုးသမီးများတွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဝန်ကြီးချုပ် အဆင့် ၃ နှင့် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် အဆင့် ၅ ရပ်တည်
AA အဖွဲ့မှ ပလက်ဝတံတားစီမံကိန်းအတွက် သံဘောင်များ နှင့် ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းများ သွားရောက်ပို့ဆောင်သည့် ရေယာဉ်များအား လက်နက်ကြီး၊လက်နင်ငယ်များဖြင့် ပစ်ခတ် »